တရုတ်ပြည်လုပ် လေယာဉ်တစ်စီး ခြေထောက်ကျိုးမှု ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွား :P | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တရုတ်ပြည်လုပ် လေယာဉ်တစ်စီး ခြေထောက်ကျိုးမှု ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွား :P
တရုတ်ပြည်လုပ် လေယာဉ်တစ်စီး ခြေထောက်ကျိုးမှု ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွား :P
Posted by စနေ on Dec 10, 2010 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 11 comments
ထားဝယ်မှ ပျံသန်းလာသည့် မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစီးသည် ရန်ကုန် လေဆိပ်တွင် ပြေးလမ်းချော်ပြီး လေယာဉ် ခြေထောက်ကျိုးမှု ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် နံနက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒန်အိုး ဒန်ခွက်အဟောင်းများကို အရည်ကျိုပြီး အလူမီနီယမ် ကိုယ်ထည်ဟူ၍ လိမ်လည် ထုတ်လုပ်ကာ၊ သူများ နှာခေါင်း အငှားတောင်း ဆိုသကဲ့သို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ် ATR လေယာဉ်စက်များ တပ်ဆင်ထားသော တရုတ်ပြည်ဖြစ် Xian MA 60 လေယာဉ်သည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က အဆင်းတွင် ခြေခေါက်ကာ ခြေထောက်ကျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးသည်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိဟု လေဆိပ်အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။ ယခု အခါ ခြေထောက်ကျိုးသွားသော လေယာဉ်ကို တရုတ် အကြောပြင် ဆရာတစ်ဦးက တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် အကြောပြင် ကုသလျက် ရှိကြောင်း၊ လိမ်ခေါက်သွားသော ဒန်သတ္တု ကိုယ်ထည်များကို ဒန်အိုးဒန်ခွက်ဆိုင်တွင် ဘော်ဒီ ပြန်ထုနေကြောင်း၊ အဆိုပါ တရုတ်ပြည်လုပ် လေယာဉ်မှာမူ ချိုင်းထောက်ဖြင့် ထော့ကျိုး ထော့ကျိုး ခရီးသွားလာနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ့လေကြောင်းက Xian MA 60 အမျိုးအစား လေယာဉ်နှစ်စီးကို ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် ပြေးဆွဲမှု ပြုခဲ့ပြီးနောက် ခုနစ်ရက်ပင် မကြာသေးမီ ယခုကဲ့သို့ ခြေထောက် ကျိုးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
Xian MA 60 ကို ဇင်ဘာဘွေကဲ့သို့ အမွဲတေဆုံး နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ၃ ကြိမ်တိုင် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
(Xian MA 60 အမျိုးအစား လေယာဉ်များကို တရုတ် လေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာ Nian Xu Tanh အနီကပ်လေ့လာပြီး သတင်းပေးပို့ထားပါသည်)
တစ်ပိသာလျှင် ငါးဆယ်ကျပ်ဖြင့် ဒန်အိုးဒန်ခွက်ဆိုင်သို့ ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့်
ချိုကျိုး နားရွက်ပဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်သုံးစီးကို တွေ့ရစဉ်
ဤပို့စ်အား http://burmastrangenews.blogspot.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ha ha ! good article
ဒီပစ္စည်း တော်တော်ခံတာပဲ .. သိထားတာက တရုတ်စက် ဆိုရင် တရက်စုတ် လို့ ဆိုထားတာ
အခုတော့ ခုနစ်ရက် ရောက်မှ ဆိုတော့ သက်တမ်း ကျော်နေပြီ ..
“တရုတ်စက် တရက်စုတ်” မှန်လိုက်လေ တော်တော်မိတယ်ဗျို့။
အမှန်ကတော့ … ဘိုးရင်းနဲ့ အဲဘတ်စ်ထုတ်လေယဉ်တွေက ..ယူအက်စ်နဲ့ အီးယူကတည်ဆောက်တာမို့ … မြန်မာပြည်ကို ချထားတဲ့ဆန်ရှင်အရ … အသစ်ဝယ်ယူခွင့်မရှိလို့ ..တရုတ်စက်(တရက်စုတ်)တွေဝယ်ရတာပါ..။
ဒီလေယာဉ်တွေကို .. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက … အာမခံလည်း ပေးမဲ့ပုံ မရှိပါဘူး..။
အခုတက်လာတော့မဲ့အစိုးရက … ဒီကိစ္စသေသေချာချာ စဉ်းစားသင့်တယ်..။
တရုတ်စက် တစ်ရက်စုတ် ဆိုတဲ့စကားက ဗမာပြည်က တရုတ်စက်တွေအတွက်ပဲ မှန်ပါတယ် ..
တရုတ်ပြည်မမှာ တရုတ်တွေသုံးနေတဲ့ တရုတ်စက်များကတော့ မပျက်လို့တောင် စိတ်ညစ်ရပါတယ် …
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ … ;)
တရုတ်စက်တွေက ..ယူအက်စ်မှာလည်း … ဒါချည်းပါပဲ..။
လက်ကိုင်ဖုံးတွေ ကွန်ပြူတာတွေ … အားလုံးလိုလို .. တရုတ်ကလုပ်နေတာပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာမှ ပျက်တာက… ကံမစပ်လို့ဖြစ်ရမယ်… ၊
တို့ ညန်မာတွေ တော်တော် တနားချရာ ကောင်းသား.. တရက်စုက်နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတာ..
he he~!so funny.^.^
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို ပို့တဲ့ တရုတ်စက် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့တဲ့ တရုတ်စက် မတူတာက သူတို့ကိုယ်တိုင် သိလိမ့်မယ် .. ထင်ရတာက မြန်မာ ဆိုတာ ဈေးပေါတာ ကြိုက်တယ်လေ .. ဒါကြောင့် ပေါချောင်တွေ ထုတ် .. မြန်မာပြည်ကို ပို့ .. ဒါဆိုရင် အလုပ်ဖြစ်ပြီ ဆိုတဲ့ အစား .. ဒါမှ မဟုတ် QC က စစ်လို့ ပယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မြန်မာပြည်ကို လက်သိပ်ထိုး ရောင်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ..
တစ်ခါတလေ အကောင်းလေးတွေ ပါလာရင် သိပ် အသုံးခံလို့ ထုချေချင်စိတ်တောင် ပေါက်တတ်ပါတယ် .. အများအားဖြင့်တော့ တရက်စုတ်တာ ၇၀% လောက် ဖြစ်နေတာပါ ..